Maalinta: Diseembar 15, 2017
Istanbul degmada Metropolitan, tareenka ugu horeysay Turkey ee driverless oo uu Üsküdar-Ümraniye Sancaktepe-Line up of qayb Ümraniye ah, waxaa la furay Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay sameeyeen Istanbul degmada Metropolitan, shaqaalaha driverless horeysay Turkey ee metro [More ...]
Tababarka Nidaamka Isgaadhsiinta ee Habka Iskuduwida
Ururka Tababarada Nidaamka Tareenka Kardemir A.Ş Xarunta Tababbarka iyo Dhaqanka 25-26 Noofambar, 02-03 Diseembar, 9 Diseembar 2017 saacadaha 25 ee Tababbarka Module Tababarka ayaa la qabtay saacadihii ugu dambeeyay. Digayaan Module Waxbarashada Turkiga [More ...]
IETT waxay leedahay caymiska shilka ee shilalka
Shilalka gawaarida 'Metrobus iyo basaska' ayaa si isdaba joog ah sannadkan loogula kulmaa IETT 2 kun 462 rakaab ah 221 kun 580 rakaab ah 470 kun oo shil caymis shaqsiyeedka gawaarida IETT ee Istanbul IETT [More ...]
Xilliga Barnaamijka Hawlgabka Gaadiidka ee IPA-I ayaa la xirey
Xiritaanka Barnaamijka Muddada ee IPA-I ee Howlgallada Gaadiidka, kaasoo ay fuliso Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Ku-Xigeenka Isuduwaha Wasaaradda; Galip ZEREY iyo Mr. Dr. 8 oo ay weheliso ka-qaybgalka Özkan POYRAZ [More ...]
Riisin weyn oo ku taala Izmir iyo bixiso inta aad tagayso nidaamka
Gaadiidka ayaa ku soo socda Izmir. Gawaarida xawaaraha ee 10, oo ay kujirto go'aanka guddiga ayaa laga wada hadli doonaa Golaha Dowlada Hoose ee Izmir. Kordhinta gaadiidka dadweynaha oo leh qawaaniinta canshuuraha cusub ee lagu soo kordhiyay Golaha Degaanka Magaalada İzmir [More ...]
Duqa Magaalada Sanliurfa Nihat Ciftci ayaa soo saaray wareegto si waafaqsan hogaamiyayaasha laanta madaxa iyo madaxa, oo ay ku jiraan maareynta maareynta caasimadda, hadda waxay adeegsan doontaa gaadiidka dadweynaha ee gaadiidka magaalada. [More ...]
Ciidamada iyo farxadda gawaarida ee Giresun
Ku dhawaaqista mashruuca tareenka Samsun-Sarp ee ka bilaaban doonta 2019 waxay farxad weyn u abuurtay dadka deggan Ordu iyo Giresun. Madaxweynayaasha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee labada gobol, ayaa ku dhawaaqay horumarka labada dalxiis iyo ka ganacsiga iyada oo la fulinayo hirgelinta tareenka. [More ...]
Turkey ee dhulka hoostiisa driverless ugu horeeyay, oo loo yaqaan Üsküdar Umraniye Metro Line ah, ayaa maanta ka furmay. Khadka Tareenka ee Uskudar-Umraniye, oo ka kooban xarumo 16 ah, ayaa la filayaa inuu saacad walba ku adeego 65 kun oo rakaab ah. metro horeysay Turkey ee driverless [More ...]
Markii Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare laga wareejiyay Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha loona wareejiyo Agaasimaha Guud ee Hawlaha TCDD, nidaamka EIA wuxuu bilaabmay bilowgii markii wadooyinka mar kale la go'aamiyay. Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare kaas oo laga wada hadlay ajandaha Antalya sanado badan, mashruuca [More ...]
MHP Talo-soo-jeedin Wareegga Dayactirka Wagon Gaadhi Wershadaha MH
Gudoomiyaha Gobolka ee Xisbiga Dhaqdhaqaaqa Wadani Bülent Avşar, oo diyaariyay warbixin ku saabsan warshadda dayactirka baabuurta in ay ahaato bakhaar logistikis iyo taarikhi ah, ayaa ogaadey in Wershadda Dayactirka ee Wagon ay noqotay saldhig logistic. [More ...]
Injiilka taraamka ee Karaosmanoglu
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay qabatay shirkii baarlamaanka ee ugu dambeeyay ee 2017. Ibrahim Karaosmanoğlu'nun oo lagu qaban doono xilka madaxweynaha inta badana horumarka maaddada ayaa laga wada hadlay oo go'aan laga gaadhay maalinta 139. Kulankii Dawlada Hoose iyo Degmooyinka Degmooyinka [More ...]
Marmaray waxay ku qaadatay macaamiisha 233 ilaa maanta
Ra'iisul Wasaaraha Binali Yildirim, buug-warbixineedka macluumaadka ayaa loo qaybiyay wakiilada Golaha Qaranka ee Wasaaradda Gaadiidka ayaa lagu wargeliyay shaqada iyo mashaariicda. Isagoo sheegay in Marmaray uu ka mid yahay mashaariicda ugu weyn adduunka, Yildirim wuxuu xusuusiyay in furitaanka 29 October lagu sameeyay 2013. [More ...]
Kuwa haysta Metrobus waxaa lasiiyay kaarar ay ku qoran yihiin ereyo ku saabsan Islaamka. Kaararka ay ku jiraan ashyaa'da Islaamiga ah waxaa la dhigay qeybaha xayeysiinta ee BRTs ee Istanbul. Qoraallada ka kooban xadiiska iyo aayadaha Quraanka, “Muslim; kale [More ...]
Demir: HT YHT Jidadka Wareegtada iyo Ka Qayb Qaadashada Baasaboorka Bilowday "
Guddoomiyaha Degmadda Ak Party Polatlı Aysel Demir Eskişehir-Ankara khadka tareenka Atlas Street Bağlarbaşı Street wuxuu isku xirayaa dadka deggan xaafada waxay bilaabi doonaan inay ka shaqeeyaan dariiqa, ayuu yiri. Wadada tareenka ee qaybaha kala duwan ee degmada [More ...]